Wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray S/land iyo qaar ka mida deeqihii la siin jrin DFS oo loo weeciyay S/land (Xog) – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray S/land iyo qaar ka mida...
Wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray S/land iyo qaar ka mida deeqihii la siin jrin DFS oo loo weeciyay S/land (Xog)
Bishii Juune 9keedii ee sanadkii 2018 ayaa dowlada Federaalka Soomaaliya waxa ay warqad u qortay beesha caalamka waraaqdaas ayaa lagu wargaliyay in deeqaha la siiyo dowlada Somaliland la joojiyo isla markaana aan loo aqoonsan in ay tahay dowlad ka madaxbanaan maamulka Muqadishu.
Qoraalka oo uu ku saxiixnaa Wasiirka Qorsheynata ee Dowlada Federalka ayaa lagu wargaliyay beesha caalamka in ayan dowlada Soomaaliya ogolaanaynin in si qaasa ama “special” ah loola dhaqmo dowlada Federaalka. Dowlada Federaalka ayaa ku dooday in Somaliland ay la mida tahay dowlad Goboleedyada dalka ka jira.
Beesha caalamka ayaa jawaab cad ka bixay qoraalkaas iyada oo lagu wargaliyay dowlada Federaalka in Somaliland si qaasa loola dhaqmayo deeqaha loogu talagalayna iyada si toos ah loo siin doono.
Waxa xaqiiqdii nasiib xumo ahayd in Farmaajo iyo Kheyreay ka hor yimaadaan in deeq la siiyo dad kale oo Soomaali ah, gaar ahaan hadii deeqdaas ayan waxba u dhimeynin Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Hadaba waxaa maanta ka degay magalaada Hargeysa wafdigii ugu balaarnaa ee ka socda beesha caalamka ee taga magaalada Hargeysa abid, Wafdigaan ayaa ka kala socda ilaa 11 wadan ayaga oo isugu jiray safiiro iyo mas’uuliyiin kale.
Wafdiga ayaa waxa ay joogi doonaa Somaliland mudo labo cesho ah. Inta ay ku sugan yihiin Somaliland ayaa waxa ay halkaas kula kulmi doonaa mas’uuliyiinta Somaliland. Waxa ay sidoo kale ay kala saxiixan doonaa heshiisyo kala duwan taas oo ay ka mid tahay in la labalaabo deeqaha loo qorsheeyay Somaliland.
Sida MOL uu xaqiijiyay mid ka mida wafuuda maanta tagtay Somaliland, Beesha caalamka ayaa waxa ay kodhinaysaa lacagta la siiyo Somaliland madaama ay horumar ka sameeysay dhamaan heshiisyadii ay Somaliland horay ula gashay beesha caalamka.
Waxaa Somaliland lagu soo wareejin doonaa qaar ka mida lacagihii horay loo siin jiray dowlada Federaalka Soomaaliya taas oo sabab looga dhigay iyada oo dowlada Soomaaliya ay ku fashilantay fulinta heshiisyadii ay beesha caalamka la gashay iyo musuqa oo ku baahan hay’daha dowlada.
Waxaaa maalinba maalinta ka danbeeysa sii lumaya kalsoondii ay beesha caalamka ku qabtay hogaanka Farmaajo. Waana ay adkaan doontaa in deeqo la siiyo Soomaaliya ilamaa uu Farmaajo isbadal ku sameeyo hogaanka dowladiisa, gaar ahaan ka xukuumada.
Halkaan ka aqriso warqadii uu Wasiir JamalM Xassan u diray beesha caalamka bratamhii sanadkii hore:
Previous articleDagaal laga cabsi qabo in uu caawa ka dhaco Balcad. Ciidamo laga diray Madaxtooyada oo Balcad ku wajah
Next articleCiidamada dowladda oo qabsaday Sabiid
War Degdeg ah! Somaliland oo Xayiraadii Covid19 Qaadey Dhamaan